Ulefone Gemini Pro wuxuu la jaan qaadi doonaa Kaaliyaha Google | Androidsis
Ulefone wuxuu sii wadaa inuu daabaco warar aad u xiiso badan oo ku saabsan calanka xiga. Markii hore waxaan aragnay faahfaahin qaar ka mid ah Ulefone Gemini y - Gemini Pro, khadka cusub ee boosteejada-dhamaadka-sare leh oo la imaan doona dhammeystir iyo astaamo dhererkiisu yahay bartamaha-sare qiime aad u macquul ah.
Hadda soo saaraha laftiisu waa uun ku xayeysiiso boggaaga in labadaba Ulefone Gemini Pro iyo taleefannada soo socda ee imanaya suuqa waxay la jaan qaadayaan Kaaliyaha Google, kaaliyaha shakhsi ahaaneed ee awoodda leh ee soo socda ee lagu rakibay telefoonnada qaarkood oo leh Android 6.0 Marshmallow ama ka sareeya.
1 Kaaliyaha Google ayaa laga heli karaa aaladaha Ulefone
Kaaliyaha Google ayaa laga heli karaa aaladaha Ulefone
Ka dib muuqaalka SIRI iyo Cortana waxaan ogaanay in si dhakhso ah ama ka dib Google ay u bilaabi doonto xalkeeda. Xaqiiqda ah in Ulefone Gemini Pro iyo inta kale ee boosteejooyinka soo saaraha ay is waafajin doonaan waa war weyn.
Ulefone ayaa ku dhawaaqday taas Ulefone Gemini Pro wuxuu si toos ah suuqa ugu dhufan doonaa Kaaliyaha Google, tan iyo markii adeegga lagu dhex dari doono nidaamka. Tan awgeed waxay wax uga beddeleen geedka qalabkooda si ay ugu isticmaali karaan adeegyada kaaliyaha gaarka ah ee Google.
Nasiib darrose Kaaliyaha Google wali lama heli karo Isbaanish, laakiin markaan arko heerka cusbooneysiinta, uma maleynayo inay waqti dheer qaadaneyso in la soo saaro nooc cusub oo la jaan qaadi kara Isbaanishka.
Xusuuso taas Kaaliyaha Google waa sirdoon awood badan oo farsameysan taas oo ururin doonta xogta iyada oo loo adeegsanayo si ay noogu soo dirto talooyinka meelaha, jawaabaha su'aalaheena, saadaasha hawada, akhrinta fariimaha ...
Waa inaan sheegaa in xaqiiqda ay Ulefone u socoto wax ka beddel firidhka qalabkaaga si ay u isticmaali karaan adeegyada Google Assistant Waa tallaabo caqli badan oo ay shirkaddu ku dhaqaaqday, oo sidan, ku maaraynaysa inay ka soocnaato tartamayaasha tooska ah ee tooska ah.
Iyada oo wax u fudud sida sameynta taleefannada Ulefone la jaanqaadi kara Kaaliyaha Google haddii aad ka labalabeyso inta u dhexeysa ka iibsiga nooc kasta oo ka socda DOOGEE, Leagoo iyo noocyada kale ee Aasiya ama mid ka mid ah xalalka Ulefone, dheelitirka ayaa laguu tilmaami karaa adiga. Tixgelin badan sida wanaagsan ee Ulefone Gemini Pro u eg yahay ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Ulefone » Ulefone Gemini Pro wuxuu la jaan qaadi doonaa Kaaliyaha Google